Hiran State - News: Wararkii ugu danbeyey ee naga soo gaaraya Golden State Hiiraan.
Wararkii ugu danbeyey ee naga soo gaaraya Golden State Hiiraan.
HS:-Diyaar garoow mudo socday ujeedadiisuna aheyd xoreynta Hiiraan ayaa ugu danbeyn dagaal qaatay dhawr saacadood iyo geeri laabda dhinac ah oo soo gala gaartay ciidamada mujaahidiinta Hiiraan ee u dhimanayey waligood xornimada iyo difaaca dhulkooda iyo dalkooda iyo kooxdii baadilka aheyd ee dhaqanada guran iyo siyaasadaha laga soo min guuriyey Afganistaan ee Al qacida dhax maray ayaa ugu danbeyn maanta xili hore ay gacantooda ka baxday magaalada istiraatiijiga ah ee Belet Weyn.
Shacabka iyo ciidamada xoreynta Hiiraan oo waxii ka danbeyey jun,18/2009 ilaa maanta dagaal toos ah kula jiray kooxda mayalka adag ee Shabaab iyo ajaaniibtooda ayaa ugu danbeyn waxey maanta u tahay guul iyo taariikh lama iloowaan ah.
Dagaalka oo ay ilaa xaleyto siyaabo kala duwan ugu jireen saraakiisha ciidamada, siyaasiyiinta, aqaoonyahanada, qurba joogta reer Hiiraan ayaa ugu danbeyn caawa sanadka cusub waxey reer Hiiraan u tahay sanad ugu bilaaban doona farxad.
Bulshada Hiiraan waxey ka mid ahaayeen shacabkii ugu horeyey ee Somaliyeed ee inta dharaar cad 100 qofood oo isakugu jira waxgarad, aqoonyahano, culimo laga xasuuqay hadane loogu daray iney ahaayeen Gaalo, hayeeshee waxkastabada maanta reer Hiiraan guusha ayaa qiimo ugu fadhisa.
Ciidamada xoreynta Hiiraan ayaa markii ay aad ugu soo dhawaadeen amaba qabsadeen garoonka diyaaradaha Ugaas Khaliif waxaa caano iyo biyo la daba joogay dumarka reer Hiiraan iyo dadkii ay kooxda mayalka adag sida toos ah ay dhibaatada ugu geysteen intii ay ku sugnaayeen amaba xooga ku heysteen argagixisadii magaalda Belet weyn.
ciidamada xoogaga Hiiraan ayaa iyagu siweyn looga dareemayey asluub iyo foojignaan iyagoona wax badan ka duwanaa qaabkii ay ku soon gali jireen dagaalka waxeyna markii ay magaalada soo galeen la kulmeen soo dhaweyn xoogan iyo shacab aad u faraxsan oo ku dulmanaa nidaamkii argagixisada.
Sarakiisha hogaamineysa ciidanka iyo siyaasiyinta ku sugan gudaha Hiiraan ayaa ku mashquulsan sidii marka hore loo sugi lahaa nabadgalyada guud ee magaalada Belet Weyne iyo nawaaxigeeda inta aan ciidamo lixaad leh loo dirin magaalada labaad ee ugu weyn Hiiraan ee Bulo Burde. sidoo kale ciidamadii ugu badnaa ee ka joogay Hiiraan kooxda Shabaab ayaa lagu soo waramayaa iney kala aadeen Bakool iyo degmada Buq Aqable iyagoo wataan caruur iyo dumar badan oo kala qaxeen magaalada Belet Weyne.
Ugu danbeyn maalmaha soo socdao waxaa lagu wadaa in guud ahaan kooxdaan iyo mabaadiideeda laga sifeeyo ciida Hiiraan iyadoo la diyaarinayo shirweyne deg deg ah marka la sugo nabad galyada guud ee Hiiraan si loo helo nidaam iyo maamul adag oo reer Hiiraan ku wada qanacsan yahiin waxana dhawan lagu dhawaaqi doonaa gudi si kumeel gaar ah u diyaariya shirweyne ay iskugu yimaadaan reer Hiiraan.
Hadaba la soco wareysiyo aanu ka soo diyaarin doono saraakiisha, iyo siyaasiyinta ku sugan gudaha ee hogaamineysa ciidanka.
· admin on December 31 2011 11:25:29 · 0 Comments · 1547 Reads ·
14,605,718 unique visits